90 taona aho izao, efa misotro ronono saingy mitamberina ato an-tsaiko daholo ny trangam-piainana nolalovako fony izaho mpiasan'ny tranom-paty tamin'ny hopitalibe iray. 35 taona no niasako tamin'izany fikarakarana faty izany. Raha saika misy maty tsy latsaky ny 5 isakerinandro, dia 5 x 48 herinandro (1 taona) x 35 = 8 400 izany no razana nokarakaraiko.
Ny bitsibitsika tato am-poko hatrizay, ka aborako anio, mba mankaiza daholo ny fanahin'ireny 8 400 razana nokarakaraiko ireny ?
Nahare toriteny mantsy aho, ary navadiko ny Baiboly, satria mba Kristiana ihany aho. Hoy Jesoa ao amin'ny Apokalypsy 14.13. : "Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin'ny Tompo hatramin'izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin'izay nisasarany izy; fa ny asany manaraka azy." Koa iza amin'izy 8 400 ireny no maty ao amin'ny Tompo ?
Nanontany Mpitandrina aho, fantatrao ve ny olona maty hoe ity voavonjy, itsy very ? An an, tsy fantatro hoy izy.
Nanontany Katekista indray aho, ny Tompo irery no mahalala izany hoy izy, fa ny azo antoka, ny samy voavonjy hihaona, ny samy very hifankahita raha sendra nifanakaiky afobe. Izany ve hoy aho.
Tsy tena afa-po aho, Mpiandry sisa no nialako nenina, fa ahoana ireny olona miteny hoe "nantsoin'ny Ray hody Aminy ireny ?" Fomba fiteny fotsiny ireny hoy ity Mpiandry, fa Jesoa Kristy Mpitsara no mahalala.
Na izany na tsy izany, izao no valin-teny nitovian'izy telo, maro no niova fo teo am-bavahoan'ny fahafatesana, inoana fa Asan'ny Fanahy Masina ireny mba hody any an-danitra. Fa tsy vitsy koa ny Kristiana miverin-dàlana tsy maharitra fakam-panahy, fitsapàna, kapoka, fanitsian'ny Tompo, ireny dia mila entina amam-bavaka, mila ampaherezina anaty facebook, twiter, radio, télé, canal sat.....
Aza adino hoy izy fa "Tena Tsara" ny Tompo. Satria hoy aho ?
Ity Ezekiela 18 ity vakio hoy ity Mpiandry ! Novakiko tokoa izany, amin'ny Anaran'i JESOSY Tompo: "26. Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany, dia maty noho ny heloka nataony ihany izy. 27. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy, dia hovelominy ny fanahiny. 28. Raha mahita izy ka miala amin'ny fahadisoana rehetra izay nataony, dia ho velona tokoa izy, fa tsy ho faty."
Tsy nahateny aho, tsapako fa be ny otako izay mamatotra ahy. Farany re tompoko hoy aho, inona no ataoko mba ho vonjena aho ? Sa sanatria ve nomen'Andriamanitra andro lava aho satria fantany fa tsy voavonjy ?
Tsia hoy ity Mpiandry, vakio indray ary ny Ezekiela 33. 11. Rehefa novakiako dia toy izao : "Lazao aminy hoe: Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny hialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany, mba ho velona izy. Mialà, mialà amin'ny lalan-dratsinareo, fa nahoana moa no te-ho faty ianareo, ry taranak'Isiraely? "
Isika ange no taranak'Israely ara-panahy hoy izy, " Tena Tsara ny Tompo e?'". Tena Tsara hoy aho sady nanapa-kevitra aho fa hanajanona ireo fato-patotra mpanakatsakana, izay mandrebireby ahy tsy hiditra ny Lanitra.
Amin'izao ora itenenako izao, sous-serum ato amin'ny hopitaly aho, efa manomboka manjavozavo izay jereko. Jesoa Kristy ô, mamela ny heloko rehetra, raiso ny fanahiko raha hiala ety, na anio na...reraka be ny fitempon'ny foko izany, nefa mahatsapa fifaliana sy fiadanana aho ato anatiko ato. Toa misy feonkiran-danitra, hiram-panahy mampitsikitsiky ahy, velom-panantenana aho fa ho voavonjy...Veloma ianareo.....mandram-pihaona. T..e..na T..s..a..r..a !
Izany no horonam-peo napetrak'ity Dadabe iray mialoha ny nodiany.
Ry Mpamaky nahazo tombon'andro anio, andao hifamonjy, ary sitrany ahay izay mamaky mba hibebaka, koa raha mba nahakasika ny fo amam-panahinao iny horonam-peon'i Dadabe iny, ka resy lahatra ianao, dia zarao amin'ireo namanao rehetra ity tantara ity na iza na iza, ary lazao ampahibemaso fa "TENA TSARA NY TOMPO".
Crée le vendredi 31 août 2018 à 16:58:04
Fanirian\_'ity zazalahy kely iray ny mba ahita izany fivoaran\_'ny akorandandin-tsamona izany ka naka iray izy ary nandinika akaiky [. . .]